काठमाण्डौमा सोमबार*देखि सिनेमा हलको *बाल्कोनीजस्तै सिट भएको बिजुली बस चल्ने ! – Tu Khabar Online
Home / समाचार / काठमाण्डौमा सोमबार*देखि सिनेमा हलको *बाल्कोनीजस्तै सिट भएको बिजुली बस चल्ने !
admin 1 week ago	समाचार Leaveacomment 88 Views
सोमबारदेखि काठमाण्डौमा बिजुलीबाट चल्ने बस गुड्ने भएको छ । निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले शुरुमा चारवटा बस सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । सोमबार दिउँसो भृकुटीमण्डपमा रहेको नेपाल पुलिस क्लबमा बिजुली बसको उद्घाटन हुने सुन्दर यातायातले जनाएको छ । अघिल्लो हप्ता सुन्दर यातायातले काठमाण्डौको भत्केको पुलमा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा* ल्याएको थियो । चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा आएसँगै काठमाण्डौको सडकमा पहिलो पटक निजी क्षेत्रको बिजुली बस गुड्ने भएको छ ।
बिजुली बस रिङरोड, नारायणस्थान हुँदै चक्रपथ, भैंसेपाटी, गोंगबु बसपार्कहुँदै सल्लाघारी भक्तपुर, कलंकी ढुंगेअड्डा हुँदै नेपाल मेडिकल कलेजसम्म विद्युतीय बस सञ्चालनमा* ल्याइने छ। विद्युतीय बसको संख्या बढाउँदै* लगेपछि सोही अनुसार रुट कायम गरिने सुन्दर यातायात सञ्चालन समितिले जनाएको छ। सुन्दर यातायातका विद्युतीय बस पहिलो चरणमा काठमाण्डौका ५ रुटमा गुड्ने छन्
पहिलो रुटमा बसहरुले चक्रपथ परिक्रमा गर्नेछन् । दोस्रो रुटमा नारायणथान, जावलाखेल–मेडिसिटी अस्पताल पुग्नेछन् । साथै तेस्रो रुटमा गोगंवु, सामाखुसी, गौशला, कोटेश्वर हुँदै सल्लाघारीसम्म पुग्नेछन् । चौथो रुट अन्तर्गत ढुंगेअड्डा, कलंकी, त्रीपुरेश्वर, वीर अस्पताल, जमल, कृष्णपाउरोटी, रातोपुल, गौशला, *चावहिल, बौद्ध, जोरपाटीस्थित अत्तरखेलसम्म पुग्नेछन्। त्यसैगरी अन्तिम रुट सूर्यविनायक, कोटेश्वर, बानेश्वर, वीरअस्पताल र जमल रहेको छ।
सुन्दर यातातातका अनुसार बस ४० सिटे र ३५ सिटे गरी *दुई प्रकारको छ । ४० सिटे बसमा अरु ३० जना यात्रुले र ३५ सिटे बसमा अरु २५ जना यात्रुले उभिएर आरामका साथ यात्रा गर्न सक्ने सुन्दर यातायात सञ्चालक *समितिका सदस्य सुरेश पोखरेलले बताए । अरु बसको तुलनामा यो बसमा सिटको व्यवस्थापन फरक तरिकाले गरिएको छ । बसमा अगाडि मात्र बस्न र उभिन खोज्ने यात्रुलाई ध्यान दिंदै पछाडिको सिट आकर्षक बनाइएको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीका अनुसार पछाडिको सिट सिनेमा हलको बाल्कोनीजस्तै हुनेछ ।
यसले गर्दा सिटमा बस्न खोज्नेहरु पछाडि *जाने र गाडीभित्रको चापलाई व्यवस्थित गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । बसको अगाडि भागमा आरक्षित सिटहरु रहेको हुनाले भिड पनि कम हुने सदस्य पोखरेलले बताए । बसमा आरक्षण सिट पनि सहजै पहिचान *गर्न सकिन्छ । त्यस्ता सिटहरु यात्रुको चाप नहुने भागमा राखिएको छ । सीसी क्यामेराको प्रशस्त प्रयोग, जीपीएस ट्रयाकिङ, एयर कण्डिसनको सुविधाले झन् बसलाई अझ यात्रुमैत्री बनाउने सुन्दर यातायातले जनाएको छ ।
त्यस्तै उभिएका यात्रुलाई सहजरुपमा समात्नको *लागि प्रयोग गरिएको ह्याङ्गर नरम र लचकदार हुँदा जुनसुकै उमेरका र उचाइका यात्रुलाई यात्रा गर्दा थप सहज हुने कम्पनीको दाबी छ । साथै कम्पनीले फोहोर व्यवस्थापनका लागि बसको सिटसँगै डस्टबिनको पनि व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीका अनुसार भाडा तिर्नका लागि यात्रुले अत्याधुनिक प्रविधिको कार्ड र ई–पेमेन्टलाई अपनाउन सक्नेछन् । यात्रुहरुले मोवाइलबाट ‘क्यूआर कोड’ स्क्यान गरेर पनि रकम भुक्तानी गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।भत्केको पुलमा सञ्चालन मा आएको चार्जिङ स्टेशनमा एकै पटक ६ ओटा बस चार्ज गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
Previous आजकाे राशिफल: भाद्र २२ गते आइतबार
Next सामूहिक बलात्कार अभियोगमा ९ जना पक्राउ